Mianatra Ny Ojibwe Miaraka Amin'i Jennifer Bobiwash	Voadika ny 27 Febroary 2013 3:42 GMT
Zarao: Jennnifer Bobiwash dia mpanoratra, mpiantsehatra, ary mpamokatra seho izay ny asany dia mifantoka amin'ny fahalinany momba ny fototra fiaviany: ny Ojibwe.
RV: Mahafantatra olon-kafa mampiasa ny Ojibway ety anaty aterineto ve ianao ? Afaka hiteny ve ianao hoe nanjary ho ohatra iray nanainga ny aingam-panahin'ny hafa? Betsaka ireo olona hafa mampiasa ilay fiteny ety anaty aterineto. Antenaiko fa ho afaka ny ho fitaratra iray hakàn'ny hafa aingam-panahy aho.
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany 12 ora izayAzia AtsinananaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
12 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaDia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa
19 ora izayAmerika LatinaCulebra, Nosin'i Pôrtô Rikô: 135 Taona Nitolomana Sy Nandresena